Multifunction Magetsi ICU Mubhedha
Chechinomwe Basa ICU Mubhedha
Zvishanu Basa ICU Mubhedha
Multifunction Eletric Mubhedha
Matatu Basa reMubhedha
Mberi Basa reMagetsi Mubhedha
Yemagetsi Dziviriro Pamubhedha
Multifunction Manual Mubhedha
Vatatu Crank Manual Mubhedha
Vaviri Crank Manual Mubhedha
Charmren Uye Yevacheche Mubhedha
Kurapa Pamubhedha Tafura
Operation Theatre Kutakurwa Stretcher
Maviri anoshanda Electric Mubhedha
DA-7 A3-Standard gadziriso 1.Constant Kureba Musoro Kunopera: Yakagadziriswa kureba musoro kumagumo inogonesa kukurumidza uye nyore kuwana kumurwere musoro, mutsipa uye thorax. 2.Split Side njanji: Iyo 4pcs PP njanji njanji inopa murwere dziviriro kubva kunaya. 3.Removable Mattress Platform: Iyo Matress platform ndeye phenolic resin mabhodhi ayo anogona kuve ari nyore kubviswa uye nyore kune sterilization. Iyo mattress yepuratifomu inogona kuita X-ray yekudzokera bhodhi uye kupa murwere kunyatsogadzikana. 4.Central Mukoti Kudzora S ...
DA-7 A2-Standard gadziriso 1.Constant Kureba Musoro Kunopera: Yakagadziriswa kureba musoro kumagumo inogonesa nekukurumidza uye nyore kusvika kumurwere musoro, mutsipa uye thorax. 2.Split Side njanji: Iyo 4pcs PP njanji njanji inopa murwere dziviriro kubva kunaya uye iyo 2 pcs yekuwedzera nzira njanji padhuze bhodhi inopa zvakanyanya kuchengetedza basa uye zvakare inopa rutsigiro panguva yekumira kwemurwere. 3.Integrated Scales system: Iyo in-mubhedha zviyero control panowanikwa iri pasi petsoka kumagumo inodzivirirwa kubva pane zvinokanganisa ...
DA-7 A1-Standard gadziriso 1.Split Side njanji: Iyo 4pcs PP njanji njanji inopa murwere dziviriro kubva kunaya uye iyo 2 pcs yekuwedzera mativi njanji padhuze bhodhi inopa zvakanyanya kuchengetedza basa uye zvakare inopa rutsigiro panguva yekumira kwemurwere. 2.Integrated Scales system: Iyo in-mubhedha zviyero control panowanikwa iri pasi petsoka kumagumo inodzivirirwa kubva pane zvinokanganisa. 3.Removable Mattress Platform: Iyo Matress chikuva nemapurasitiki emapuranga ayo anogona kuve nyore kubviswa uye nyore sterilization ...
DA-2 A3-Standard gadziriso 1.Split Side njanji: Iyo 4pcs PP njanji njanji inopa murwere dziviriro kubva kunaya. 2.Removable Mattress Platform: Zviri nyore kubviswa uye nyore sterilization. Iyo mattress yepuratifomu inogona kuita X-ray yekudzokera bhodhi uye kupa murwere kunyatsogadzikana. 3.H / F Mabhodhi eKukora: Iyo yemubhedha yedhivhari inodzivirira kubvisa netsaona yemabhedhi emabheji kana uchitungamira kana kubata mubhedha. 4.Protential kona bumpers 5.Kusimudza danda kana infusion kumira maburi 6.Matress vanobata ...
DA-2 A2-standard gadziriso 1.Split Side njanji: Iyo 4pcs PP njanji njanji inopa murwere dziviriro kubva kunaya. 2.Removable Mattress Platform: Zviri nyore kubviswa uye nyore sterilization. Iyo mattress yepuratifomu inogona kuita X-ray yekudzokera bhodhi uye kupa murwere kunyatsogadzikana. 3.H / F Mabhodhi eKukora: Iyo yemubhedha yedhivhari inodzivirira kubvisa netsaona yemabhedhi emabheji kana uchitungamira kana kubata mubhedha. 4.Protential kona bumpers 5.Kusimudza danda kana infusion kumira maburi 6.Matress vanobata ...
DA-2 A1-standard gadziriso 1.Split Side njanji: Iyo 4pcs HDPE mativi njanji inopa murwere dziviriro kubva kunaya. 2.Removable Mattress Platform: Zviri nyore kubviswa uye nyore sterilization. Iyo mattress yepuratifomu inogona kuita X-ray yekudzokera bhodhi uye kupa murwere kunyatsogadzikana. 3.H / F Mabhodhi eKukora: Iyo yemubhedha yedhivhari inodzivirira kubvisa netsaona yemabhedhi emabheji kana uchitungamira kana kubata mubhedha. 4.Protential kona bumpers 5.Kusimudza danda kana infusion yakamira maburi 6.Matress Holde ...
Nyorera Kune Redu Retsamba
pama media edu enhau
Chekutanga batch yezvipo ye ICU mibhedha o ...
Imwe pfungwa yekudzivirira uye kudzora epide ...